Iimpawu eziPhambili ze-Android 11: Ungazifumana njani nakweyiphi na ifowuni Phone yesiphelo
UGoogle, njengonyaka, uhlaziya inkqubo yakhe ye-Android ngokwazisa izinto ezininzi ezinomdla kunye nokwenza ngcono yonke imisebenzi ebonwayo ngokukhutshwa kwangaphambili, ukuthatha amava omsebenzisi kwinqanaba elitsha kwaye alwe ngokulinganayo nembangi yexesha lonke, i-iOS. Inkqubo yesalathiso yee-iPhones kunye nokhuphiswano olwandayo nakwicala lokwenza ngokwezifiso).
Ukuba asikwazi kuvavanya i-Android 11 kwangoko kwaye sinomdla wenguqulo entsha, uze kwisikhokelo esifanelekileyo- apha siza kukubonisa inyani. ezona mpawu zibalulekileyo zaziswe nge-Android 11 kwaye, ukuze ugqibezele ngakumbi, siza kukubonisa Ungazifumana njani iimpawu ezifanayo nakweyiphi na i-smartphone ye-Android, ke akufuneki uthenge iGoogle Pixel elandelayo okanye ulinde i-Android 11 ukuba ifike kwiifowuni zomntu wesithathu.
FUNDA OKANYE: Faka i-Android 11 kwiWindows 10
Isikhokelo seMpawu ze-Android 11
Njengoko kukhankanyiwe kwintshayelelo, kwezi zahluko zilandelayo siza kukubonisa ukuba zeziphi izinto ezibalulekileyo ezinokufumaneka kuhlobo lwe-11 lwenkqubo yokusebenza ye-Android nakwinqaku ngalinye siza kukubonisa ukuba ungayifumana njani kuyo nayiphi na i-Android efowuni ene inguqulelo 7.0.
Iimvume zethutyana zezicelo
Phakathi kwezinto ezibaluleke kakhulu kwezokhuseleko kwi-Android 11, i iimvume zethutyana- Xa isicelo sisicela imvume, sinokubonelelwa okwethutyana kude kube kuvalwa isicelo; oku kuyakusivumela unikezele ngeemvume ezibaluleke kakhulu ixesha elifutshane, ngaphandle koloyiko lokuba isicelo singaphinda sisebenzise xa singasetyenziswa okanye emva kwexesha elide lomsebenzi.
Ukuba sifuna ukwazisa lo msebenzi nakweyiphi na i-Android yanamhlanje (ekhutshwe kwiminyaka emi-2 okanye emi-3 edlulileyo kunye ne-Android 7 okanye ngaphezulu) khuphela usetyenziso Uxhaphaza, efumaneka simahla kwiVenkile yeGoogle yokuDlala kwaye inakho ukubuyisela ngokupheleleyo inkqubo yeemvume eyakhelwe kwi-Android, ukuze ikwazi ukubonelela ngeemvume zethutyana ezinokuzenzekelayo (sinokunika imvume yexesha elithile, kunye nokukhawulela ukuvala usetyenziso).
Kukangaphi kwenzeka kuthi ukuba sivale isaziso ngempazamo kwaye singaqondi ukuba yeyiphi iapp ebhekisa kuyo? Kwi-Android 11 le ngxaki yoyisiwe, kuba ikhona enye ekhoyo Imbali yezaziso ezivele emnxebeni, ukuze uhlale uchonga isicelo okanye uqonde ukuba ngowuphi umyalezo ongafundwanga.
Ukuze ukwazi ukudibanisa imbali yesaziso kuyo nayiphi na i-smartphone ye-Android, khuphela usetyenziso Yazisa umgcini, Iyafumaneka simahla kwiVenkile yeGoogle yokuDlala kwaye inakho ukwazisa eli nqaku nakwiifowuni ezindala kakhulu (inkxaso encinci yi-Android 4.4).
Nge-Android 11 sinako ekugqibeleni rekhoda yonke into eyenzekayo kwiscreen kwifowuni yethu (ukwenza izikhokelo kunye nokubonelela ngoncedo) kunye nokwenzeka ikwarekhoda iaudiyo ngemakrofoni eyakhelweyo, ke akukho mfuneko yokuba usebenzise izicelo zomntu wesithathu.
Ukusukela kude kube yi-Android 10 lo msebenzi unokufunyanwa kuphela kusetyenziswa, sifumene iindlela ezininzi zokurekhoda ikhusi kwaneefowuni ezindala; Ngale nto sicebisa ukuba ukhuphele usetyenziso Ukurekhoda kwesikrini AZ, Iyafumaneka simahla kwiVenkile yeGoogle Play.
I-Bolle ngengxoxo nganye (thetha amaqamza)
Kwi-Android 11, enye yezona zinto zidumileyo kuFacebook Messenger zaziswa kwinqanaba lenkqubo, ezizezi chat bubbles (Iincoko zencoko); ngabo sinako fumana izaziso kwaye uphendule izingxoxo ngelixa usebenzisa enye iappnjengoko ziya kuvela njengamaqamza agqithisileyo (onokucofa ukuphendula).
Ukuba sifuna ukusebenzisa lo msebenzi nakweyiphi na i-smartphone, sebenzisa nje Facebook Messenger (Iyafumaneka simahla kwiVenkile yeGoogle Play) okanye, ukuba sifuna ukuyandisa kuzo zonke izicelo, sithembe usetyenziso olunjengolo Ngqo, ikwafumaneka simahla kwiGoogle Play Store.
Phakathi kwezinto ezintsha ze-Android 11 sikwafumana inkqubo entsha yolawulo lwesicelo semultimedia: xa sivula iSpotifty, iYouTube okanye usetyenziso olufanayo, a Jonga ngokukhawuleza iwindows ngokuthe ngqo kwimenyu yokuhla kwe-Android, ecaleni koseto olukhawulezayo.
Sinokwazisa oku kusebenza nakweyiphi na i-smartphone ye-Android ngokufaka usetyenziso olunje Isithunzi samandla, Iyafumaneka simahla kwiVenkile yeGoogle yokuDlala kwaye inakho ukubonelela ngokusesikweni okuphezulu kwebar yesaziso nakwisikrini esineendlela ezimfutshane.
Cwangcisa imowudi emnyama
Nangona lo msebenzi ungeyonto intsha (ukho umzekelo kwisizukulwane esitsha seSamsung), uGoogle naye uhlengahlengisile kwaye nge-Android 11 ikuvumela ishedyuli yokuvula imowudi emnyama okanye imowudi emnyama, ukuze uyenze isebenze ebusuku okanye ngalo naliphi na ixesha losuku
Uninzi lweapps sele zikuvumela ukuba ucwangcise imowudi emnyama (okanye imowudi emnyama), njengoko kubonisiwe kwisikhokelo Uyenza njani imowudi emnyama kwiiapps ze-Android neze-iOS; kodwa ukuba sifuna ukucwangcisa le ndlela kule nkqubo iphela, sinokuqiniseka ukuba isicelo sinje Imo emnyama, Iyafumaneka simahla kwiVenkile yeGoogle Play.
Ngelixa ezi zinto ziya kwenza ithamsanqa leePixels ezintsha kunye nazo zonke izixhobo eziza kuba ne-Android 11 njengenkqubo yokusebenza, oko akuthethi ukuba abasebenzisi abaneenguqulelo zangaphambili ze-Android kuya kufuneka bashiye ngasemva! Ngeeapps esizicebisileyo, sinokuzuza ngokugqibeleleyo kwezona zinto zinomdla kwi-Android 11 ngaphandle kokuthenga iGoogle Pixel okanye nasiphi na isizukulwana esitsha sefowuni esine-Android 11 ebandakanyiweyo.
Ukuba sifuna ukufumana i-Android 11 entsha ngazo zonke iindleko, sicebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu Uhlaziyo lwe-Android: ngubani okhawulezayo phakathi kweSamsung, iHuawei, iXiaomi kunye nabanye abavelisi? mi Jonga uhlaziyo kwiHuawei, Samsung kunye neefowuni ze-Android.
Iinkqubo ezi-8 ezilungileyo zokuswayipha kwi-PC
Iiapps zemozulu ezi-6 ukuze imozulu ingakufumani ungalindelanga
Ungazicima njani iicookies kwiChannel, Firefox, Edge kunye neSafari
Ezona SmartBands zibalaseleyo, zoqoqosho kunye nokusebenza njengewotshi efanelekileyo
Ungayihlela njani ividiyo kwiTikTok
Uyivula njani i-bootloader kwiXiaomi